Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ya na BMK, Afrịka njem nlegharị anya nke Afrịka furu efu
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Dr. Bulaimu Muwanga Kibirige, makwaara dị ka BMK
N'ezie, nke Chukwu bụ nke anyị, ọ bụkwa Allah ka anyị ga -alaghachi bụ ozi mgbe Onye isi ala Uganda Yoweri TK Museveni ghọtara nnukwu onyinye Dr. Bulaimu Muwanga Kibirige, nke a makwaara dị ka BMK. O wuoro Afrịka nnukwu ego na njem njem na njem nlegharị anya. BMK nwụrụ n'ụlọ ọgwụ Nairobi hapụrụ nwunye ya na ụmụ ya iri na asatọ.
Bulaimu Muwanga Kibirige, nke a makwaara dị ka BMK, nwụrụ anwụ n'ụtụtụ Septemba 10, 2021 na ụlọ ọgwụ Nairobi ka ogologo oge ya na ọrịa kansa prostate chọpụtara na 2015.
Amụrụ na Ọktoba 2, 1953, BMK bụ onye ji aka ya kụziere onwe ya, onye bilitere site na nwata nwoke gụchara akwụkwọ ka ọ gachara ụlọ akwụkwọ sekọndrị ka ọ gaa zụọ kọfị n'akụkụ nna ya nwụrụ anwụ na onye ndụmọdụ mbubreyo Hajj Ali Kibirige ka ọ bụrụ otu. ndị ọchụnta ego kachasị baa ọgaranya na akara ngosi na mba na karịa.
Ọ bụ onye isi oche nke ụlọ ọrụ BMK Group na onye ọchụnta ego na-emeri ihe nrite nwere otu njiri mara ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ndị a ma ama na mpaghara gụnyere 233 nwere ọnụ ụlọ 4 Hotel Hotel Africana nke bụ ebe kacha mma maka nzukọ na ogbako n'obodo Kampala na-anya isi. nke ebe mgbakọ nwere ike ịnọdụ ndị nnọchi anya 3,500 na ụlọ BMK.
Ndị ọbịa na -etinyekwa ego na Moroto na Northeast Uganda na Hotel Africana Lusaka Zambia.
BMK tinyekwara ego na ezigbo ala, akụrụngwa ihe owuwu, ndị na -ekesa ọgba tum tum, na ụlọ ọrụ mgbanwe mba ofesi na Uganda, Kenya, Tanzania, Dubai, Rwanda, Japan, na Zambia.
BMK hiwekwara ịgba ịnyịnya Boda Boda - okwu nke rutere na ọkọwa okwu Cambridge English nke pụtara "ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ọgba tum tum ejiri dị ka tagzi maka iburu onye njem ma ọ bụ ngwongwo."
Ọ rụkwara ọrụ na tebụl okpuru ọchịchị onye isi ala (PIRT), nnọkọ pụrụ iche maka ndị ọchụnta ego a ma ama nke Onye isi ala na -elekọta, na -adụ gọọmentị ọdụ ka esi emeziwanye ọnọdụ itinye ego na mba ahụ.
Pọtụfoliyo ndị ọzọ o nwere gụnyere onye bụbu onye isi oche na onye isi oche nke Uganda Isi nke Uganda North American Association (UNAA) na Onye isi oche Uganda-American Sickle Cell Rescue Fund.
E nyere ya doctorate of Philosophy in Humanities na United Graduate College na Seminary.
A kacha kọọ akụkọ BMK n'akwụkwọ ya "Akụkọ m nke iwuru Fortune na Afrịka."
Amalitere na Machị 2021 mgbe ọ na -arịa ọrịa, ọ na -akọ banyere etu n'agbanyeghị nsogbu ndị dị na ndụ, o jisiri ike mee ya wee wuo akụ na ụba n'Africa.
Na 1982, n'oge njem azụmahịa ọ ga-amalite na Japan, onye ọchụnta ego BMK juru akpa na $ 52,000 wee banye ụgbọ elu site na Hong Kong. Na Hong Kong, ọ ga -agbanwe ụgbọ elu maka ụkwụ ikpeazụ nke njem ya.
Mgbe ọ na-akwụ n'ahịrị na mbata mbata n'ọdụ ụgbọ elu, ọ tọgbọrọ akpa ya ka ọ na-eche oge ya iji nweta ngafe ịbanye.
Otu onye ohi jidere akpa ahụ wee gbaa ọsọ ọsọ o nwere ike. BMK dara mkpu dịka o nwere ike mana nke ahụ enweghị ike ịkwụsị onye ohi ka ọ tụbara n'ọdụ ụgbọ elu mmadụ juru.
Ego ya niile lara. Paspọtụ ya kwa, ọ nweghịkwa ike ịga Japan. A ga -ebuga ya Uganda ọzọ ebe a gaara atụba ya nga ma ọ bụ gbuo ya.
Ọ gbapụrụ wee malite ibi na mpụga na Nairobi ebe a na -enyo ya enyo na ọ na -eme ihe na -agba ọchịchị mgba okpuru n'ihi akụ na ụba ya.
BMK na -akọ akụkọ ndụ ya ka ya na ndị ezinụlọ ya na -arụkọ ọrụ, guzobe azụmaahịa n'ọtụtụ mba, na oge kacha nwee obi ụtọ na ndụ ya - atụmatụ ya maka BMK Group yana ihe ọ chere na onye ọ bụla nwere mmasị iwulite akụnụba n'ime afọ 40 sochirinụ kwesịrị. mee.
N'ịkwado ọdọ mmiri BMK, Onye isi ala Uganda Yoweri TK Museveni nwere ihe a ikwu: “Ana m agwa ezinụlọ Dr.Hajji Bulaimu Muwanga Kibirige (BMK), ndị ikwu, ndị otu azụmahịa, na ndị na-achọ ọdịmma.
“Dr. A ga -echeta Bulaimu ruo mgbe ebighị ebi maka nnukwu onyinye o nyere n'ịmepụta akụ na ụba na Uganda na Africa. "
“Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na udo ebighi ebi,” ka odeakwụkwọ na -adịgide adịgide nke Ministry of Tourism Wildlife and Antiquities, Doreen Katusime kwuru.
“Ọnwụ Dr. Bulaimu Kibirige bụ nnukwu mfu nye ụlọ ọrụ njem na ndị ọbịa.
“Ọ bụ onye ndu pụrụ iche na onye nwere ezigbo ọmarịcha mmetụta.
"Dịka nnukwu ụlọ ọrụ, ọ bụụrụ ọtụtụ ndị mmụọ nsọ.
"BMK ga -asọpụrụ ma na -akwanyere ya ugwu mgbe niile maka nnukwu ihe ọ rụzuru, ọ hapụkwara ihe nketa nke ga -esiri ike ijikọ."
Ebe E Si Nweta Foto: Ronnie Mayanja Uganda Network Network
Onye isi oche ndị nlekọta ndị njem na Uganda Hon. Daudi Migereko kwuru, sị: “Enwetara m akụkọ mwute banyere ọnwụ nke Haji Ibrahim Kibirige nke ụlọ ọrụ BMK Group na Hotel Africana.
“Kibirige enyela nnukwu onyinye na ile ọbịa, njem nlegharị anya, na ụlọ ọrụ onwe na Kampala, Uganda na Great Lakes Region of Africa.
“Ọnwụ ya bụ nnukwu mfu nye ezinụlọ ya, òtù ndị njem, Uganda na Africa. Anyị na -ekele Allah maka onyinye na ntọala ọ hapụrụ. Ka mkpuru obi ya zuru ike na udo ebighi ebi.
Site na ndị otu ndị nwe ụlọ nkwari akụ Uganda (UHOA) ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi oche gara aga, akwụkwọ mmado Twitter na -agụ, sị: “Dr. BMK bụ ihe atụ nke ịdị mma, ịrụsi ọrụ ike, ịdị umeala n'obi, na o mere ọtụtụ ihe maka ngalaba ile ọbịa; a ga -atụ uche ya, mana ihe nketa ya ka dị na UHOA na azụmaahịa BMK niile. "
Susan Muhwezi (Chairlady) kwuru, "zuru ike enyi m. "N'ọgwụgwụ afọ 2000 mgbe ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Uganda na ndị na -eme njem nlegharị anya na -enwekarị nkụda mmụọ na teepu uhie iji kwado ihe ngosi dị ka ITB Berlin na WTM London, BMK jiri mmetụta ya na tebụl okirikiri onye isi ala (PIRT) iji gafee ndị ọrụ gọọmentị wee nweta ego maka isonye. . ”
BMK bụ onye Alakụba na -anụ ọkụ n'obi nke nwere aha Hajj nyere ya, na -ekwu maka onye Alakụba nke mere njem ala nsọ nke Mecca.
Ọ lụrụ ụmụ nwanyị abụọ - Sophia na Hawa Muwanga - yana ụmụ iri na asatọ.
"Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un" - N'ezie, ọ bụ nke Chineke ka anyị bụ, ọ bụkwa Allah ka anyị ga -alaghachikwute.